Ref:Chinese Jeff Bezos က ဘယ္သူလဲ? - Pandaily
Categories: Opinion ကိုKevin Zhou စက်တင်ဘာ 10, 2021 စက်တင်ဘာ 11, 2021 မှာ Posted
သိပ္မၾကာေသးခင္ကပဲ တရုတ္ႏုိင္ငံ CITIC က ထုတ္ေ၀တဲ့ Brad Stones အမည္ရ စာအုပ္ တအုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိေပးလုိက္ပါတယ္ “ အမေဇုန်မှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့အေမရိကန္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ “ပထမအသုတ္အျဖစ္ တရုတ္နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ မစၥတာစတုန္းေက်ာက္က တရုတ္ျပည္သို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ေရာက္လာျပီး ထံုးစံအတိုင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ Xiaomi ႏွင့္ Drip တို႔အေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ သူ႔ကို တကယ္ေတြ႕ဖူးတာ ခဏခဏပဲ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ကျောက်စာရဲ့ “အရာရာတိုင်း” ကို Amazon က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြခဲ့ပြီး “ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကျောက်စာ” ဟာ နှစ်စဉ် ရောင်းအား အကောင်းဆုံး စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ယုံကြည်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာမယ် ဆိုရင် ရောင်းကောင်းလာမယ်။
သို႔ေသာ္ Amazon ႏွင့္ ၎၏ တည္ေထာင္သူ ဂ်က္ဖ္ဘီယက္ဇ္သည္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာတစ္ထရီလီယံ တန္ဖိုးရွိႏိုင္ၿပီး ယင္းစာရင္းတြင္ တ႐ုတ္လူထု၏ အာ႐ံုစိုက္မႈအနည္းဆံုး– အက္ပဲလ္၊ Microsoft ၊ Amazon ၊ ဂူဂဲလ္၊ Face Book ႏွင့္ Tesla (မၾကာေသးမီက Tesla Club) တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။
Memories တွေအကြောင်း ပြန်ပြောပြရရင် မကြာသေးခင်ကပဲ တရုတ်နိုင်ငံမှာ Bezos နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရာတွေကို ဇာတ်လမ်းတိုနှစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး တရုတ်မိုဘိုင်းကုမ္ပဏီ Xiaomi တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Reyze အမည်ရ “တရုတ်လူမျိုး Steve Jobs” အမည်ရ နောက်ဆုံးနှစ်ပတ် မိန့်ခွန်းကို လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်က ဖော်ပြခဲ့ပြီး Bosos သို့ သွားရောက်သောအခါ သူက သူ့ကို တောင်းပန်ကြောင်း၊ နာက်မှာ ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ဂရုမစိုက်ဘဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်ရောင်းခဲ့ကြောင်း Jyo (Ray Army Online Book ကို တည်ထောင်သူ တဦး ဖြစ်သော Amazon) က ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတိုင်မီက ပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရောင်းချသူအများအပြားဟာ အမေဇုန်ရဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ယာယီရပ်ဆိုင်းဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပိတ်ပင်ခံထားရပါတယ်။ တ႐ုတ္အင္တာနက္သံုးစြဲသူအမ်ားအျပားက ယင္းကိစၥကို ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ဒါပေမယ့် ကျနော်မြင်တာကတော့ စာအုပ်ရဲ့ အခန်း သတ္တမမြောက်မှာ ရှုထောင့်အသီးသီးက ရှင်းပြတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကျနော် အကြိတ်အနယ် မဆွေးနွေးချင်ပေမယ့် စာအုပ်အသေးစိတ်ကို ကျနော်ပြန်ဖြေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ တရုတ်နည်းပညာအသိုင်းအဝိုင်းက မေးခဲ့ကြပါတယ်: သူက တရုတ်လူမျိုး Jeff Bezos ပါ?
ပထမအချက်ကတော့ Wang Xing ဟာ Bezos နဲ့ သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ယုံကြည်သူ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါသမယတွင် သူက Bezos ၏ ကျက်သရေရှိမှုကို ဖော်ပြရန် သူ၏ ဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝသော အကြံအစည်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖန်တီးကာ ခေါင်းဆောင်ကြီးကို အကန့်အသတ်ဖြင့် တိုးချဲ့ရန် ကတိပြုခဲ့သည်။ Wang Xing ကိုလည်း မကြာခဏပြောလေ့ရှိတဲ့ အမေရိကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က နောက်ထပ် Amazon ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ တာဝန်ထမ်းဆောင် စေတာပါ။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်ကာ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဝယ်ယူမှုပိုမိုများပြားလာခဲ့ကာ: ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ရောင်းချခြင်း၊ ညစာ ပေးပို့ခြင်း၊ ခရီးသွားအပန်းဖြေစခန်းများ၊ အငှားယာဉ်များ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးချေသည့် လိုင်းများ၊ လက်လီဆိုင်များပင်ဖြစ်သည်။ သိပ္မၾကာေသးခင္ကပဲ အေမရိကန္ အုပ္စုဟာ ခ်စ္ပ္ျပားေတြနဲ႔ စက္ရုပ္ေတြကို ေစ်းကြက္ထဲ စတင္တူးေဖာ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Wang Xing ဟာ အမေရိကန်အဖွဲ့ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံ ရန်ပုံငွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wang Sing Chang ကို အမေရိကန်အဖွဲ့ရဲ့ Behind of Amazon ဝက်ဘ် ဆိုက်မှာ ဝယ်ယူပြီး အုပ်စုဖွဲ့ကာ အရူးအစားဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ေနာက္ပိုင္းမွာ တရုတ္နည္းပညာမီဒီယာနဲ႔ အင္တာဗ်ဳးမွာေနာက္က်မွWang Sing က “Amazon က တခါတုန္းက ဖုန္းေတြ ေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕မႈ မလုပ္ဘဲနဲ႔ အေမရိကန္ အဖြဲ႕ကုိ ေမးျမန္းတဲ့ အခါမွာလည္း Wang Sing က “အေမဇုန္မွာ Cloud Search and Prime Member Programme.. အဲဒါကုိေတာင္မွ Netflix ရဲ႕ အစြမ္းထက္တဲ့ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတဲ့အတြက္ Amazon အေနနဲ႔ Competition မွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္” လုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
သူက ဆက်ပြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ “လူသိပ်များတဲ့နယ်စပ်က အမာခံ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အမှန်က ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး ၊ နယ်နိမိတ် ရှင်းလင်းမှု မရှိပါဘူး. ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကန့်သတ်ချက်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမာခံကိစ္စတွေအတွက် သိပ်ကိုရှင်းလင်းပါတယ်: ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသရွေ့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်ချဲ့ထွင်တီထွင်နိုင်မလဲ” လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလတုန်းက Amazon ရဲ့ ဈေးကွက်တန်ဖိုးဟာ ၁.၂ ထရီလျံအထိ ရောက်ရှိသွားချိန်မှာ Wang Sing က ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ “ဒီနေ့အထိ လူအများစုကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Bosos လိုပဲ Wang Xing အတွက်လည်း စပ်စုစိတ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဟိုတုန္းက အေမရိကန္သံအဖြဲ႕မွာ မပါေသးဘူးဆိုေတာ့ ဒီေန႔ဒီေလာက္ လြတ္သြားတဲ့ အခါမွာက်ေတာ့ သူ႔ကို စကားေျပာၿပီး ေမးခြန္းေတြ ေမးခဲ့ဖူးတာ ေတြ႕ရတယ္ေလ။ သူ႔ကိုယ္သူ တစ္ခုခု လုပ္မိမွန္းသိၿပီး သူ႔အေၾကာင္း စပ္စုၾကည့္မိသည္။ Silicon Valley ကို ပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ Wang Xing Silicon က ကျွန်မကို ဘာမှမဆန်းတော့ပါဘူး။
အမေရိကန်မစ်ရှင်အဖွဲ့ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Wang Xing University ရဲ့ အခန်းဖော် Wang Hye Kyi က ယခုလို အကဲဖြတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နာက် Wang Xing ကတော့ Type စွန့်ဦးတီထွင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ စိတ်တူကိုယ်တူကို ရှာဖွေနေသူဖြစ်သင့်တယ်လို့ Jeff Beasos က ယူဆခဲ့ပါတယ်။
Wang Xing နဲ့ Bezos တို့ဟာလည်း Long Line ကို ပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ Wang Xing ဟာ တစ်ချိန်က မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ မဟာဗျူဟာကျတဲ့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အမေရိကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာပြီး ရေရှည်တည်တံ့တိုးတက်တဲ့ ကုမ္မဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်ကျိုးက သူ့စကားတွေကို မျှဝေတင်ဆက်ရင်း “လူတော်တော်များများဟာ စစ်ပြန်ဖြစ်တာကို မှားယွင်း နားလည်ပြီး စစ်ပွဲတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ အနစ်နာခံ တိုက်ပွဲဝင်နေရုံနဲ့ ပိုပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ခံစားနေကြရတာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းတရုတ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုတိုးမြှင့်ရာတွင် စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် Power Bank ငှား ရမ်းခြင်း ကုမ္ပဏီများပါဝင်ဟု အမေရိကန်ပြော
Wang Xing ဟု အမည္ေပးထားသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို “ အကန့်အသတ်ဖြင့်‘‘အကန္႔အသတ္နဲ႔ ကစားတဲ့ပဲြက နယ္စပ္မွာကစားတဲ့ ပဲြပါ။ ဒါပေမယ့် အကန့်အသတ်နဲ့ ကစားတဲ့ ဂိမ်းတွေ၊ ကစားတဲ့ ဂိမ်းတွေဟာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ စူးစမ္းရွာေဖြရင္းနဲ႔ နယ္စပ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တာပါပဲ။ သို႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ကစားရျခင္းသည္ သင့္ဘဝအတြက္ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းတရားသည္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တခြားနယ်နမိတ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒီလိုတန်ဖိုးရှိပုံမရဘူး။ “
အခု အမေရိကန်အဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ “Life Style Business ” ဟာ စစ်ပွဲတွေ၊ အကန့်အသတ်တွေနဲ့ ဂိမ်းကစားနေသလိုပါပဲ။ အကန့်အသတ် ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Beasos က “ပထမနေ့” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Bosos ကုမ္ပဏီဟာ “1 Day” မော်ဒယ်ကို ယုံကြည်အားမာန်အပြည့်နဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ဗဟိုပြုကာ မိမိကိုယ်ကို ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပြီး ဆက်လက်ကြီးထွားအောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ‘‘ေနာက္ရက္ေတြမွာ ထုိင္းမႈိင္းတယ္လို႔ ထင္တဲ့သူနဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘူး။ ထိုအခါ အလွန်အမင်း နာကျင်နွမ်းနယ်လာသည်။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေသသြားတယ္။
ထိုကဲ့သို့သော ကာလရှည်ကြာစွာ နေခဲ့ရသော Bezos နှင့် Wang Xing တို့ကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်များက ပေလတိုကို “သေဆုံးသူများကိုသာ စစ်ပွဲ၏ အဆုံးသတ်” ဟု မြင်ကြသည်။
ကိုVivian Xu Jul 21 Jul 21 မှာ Posted
Metavierse ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ အတုအေယာင္ ကမၻာႀကီး
ကိုRicher Xu May6May7မှာ Posted
ဒီေန႔ဒီေဆာင္းပါးမွာ “Metavierse Chat to the Future of the Future of the Internet ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဦးတည္ခ်က္ေတြထဲက တခုျဖစ္တဲ့ “Reality World of the We Real” ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။